Global Voices Podcast 3: Fiantraikan’ny Fikomiana Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, bahasa Indonesia, srpski, Español, English
Amin'ity andiany Global Voices Podcast ity no handrenesanareo ny fiantraikan'ny fihetsiketseham-bahoaka Arabo sy ahitanao izany hoe ahoana izany mpitari-dalana nomerika izany ary hiresaka momba ireo hevitra miteraka ny fitsipi-pifehezana tsara.
Voalohany, fampahatsiahivana izay nitranga vao haingana tamin'ity taona ity . Nahitana revolisiona tao Tonizia ary voaongan'ny mpanao fihetsiketsehana Ejypsiana ihany koa ny mpanao didy jadona tao amin'ny fireneny.
Feo avy ao Ejipta
Nandalo an'i Kairo ny iray amin'ny mpanoratra, Maria Grabowski, te-hitsapa ny fahatsapan'ny olona volana vitsivitsy taorian'ny fitroarana iny. Nandray feo ny fijoroana vavolombelona mampihetsi-po nataon'ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Ejipta i Maria, ary nitsidika ihany koa ny fihetsiketsehana teo ivelan'ny Ambasady Syriana izay nanehoan'ny vahoaka ny fanohanana ny fihetsiketseham-panoherana ao Syria.
Ohatra iray ny amin'ny fomba nielezan'ny fihetsiketseham-panoherana nihoatra sisintany izany. Kanefa hatraiza ny fiantrakan'ny fiparitahan'ity fihetsiketsehana ity. Satria tamin'ity taona ity no nahitana ny lohataona Arabo, moa va nahitana Lohataona Afrikana tamin'ny firenena ambin'ny kaontinanta?
Ndesanjo Macha no tonian-dahatsoratra faritra Afrika Atsimon'i Sahara, avy any Tanzania izy ary monina ao Zambia. Noresahanay ny hevitra azon'ny mpanohitra any amin'ny firenena atsimon'i Sahara tamin'ny fihetsiketsehana tao Afrika Avaratra.
Na dia samihafa aza ny antony dia tsipalotra ho nakana lesona tany amin'ny faritra hafa ao amin'ny kontinanta Afrikanina ny fijoroana natao. Niresaka tamin'iray amin'ireo mpanoratra ato aho dia i Steve Sharra avy any Malawi. Na dia tsy nhitana fitroarana mitovy min'ireo nitranga aza i Malawi dia nisy ny fiantrakan'izany ka manaporofo fa misy ny fifaningorana lalina amin'ny zavamisy nandritra lohataona Arabo.
Famakafakana ny fifandraisana ato Afrika no lohahevitra podcast amin'ity volana ity, hita taratra tokoa fa nitombo ny fampiasana ny fitaovana nomerika sy fidirana an-tserasera aty amin'ny firenena Afrikana, saingy mbola maro ny asa tokony mbola hotanterahina.
Misy ihany koa anefa ny vaovao mahafaly!
Mpitari-dalan'ny Global Voices
Folo amin'ireo bilaogera matihanina aminay ao amin'ny Global Voices sy mpikatroka 11 no saiky miara-misalahy amin'ilay fandraisana andraikitra vaovao novelabelarin'ny Global Voices sy ny mpikatroka, tambazotran'ny tanora amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana, ActionAid.
Afaka nihaona tamin'ny iray amin'ireo mpitarika aho, Nwachukwu Ebunike ao Nizeria izay miara-miasa amin'ilay tanora mpikatroka Nizeriana sady bilaogera David Habba aho. Araka ny filazan'i Nwachukwu, tsy hoe miezaka mametraka ohatra tsara sy mizara fahaizana ara-teknika ihany ny mpitari-dalana fa miatoka ihany koa fa hidongona anay ny taranaka manaraka ao anaty serasera tonga lafatra sy amin'ny fampiasana ny aingam-panahiny manokana avy amin'ny feon'ny tanora.
Fitsipi-pitondrantena ho an'ny olo-tsotra mpanao gazety
Ankehitriny, mitombo ny olo-tsotra mpanao gazety ary lasa be filirony kokoa, ilaina ho an'ny mpanoratra ny manaraka fitsipi-pitondratena? Afef Abrougui, mpanoratra ao amin'ny Global Voices avy any Tonizia, nitondra karazana lalàm-pitondratena hiadian-kevitra ao amin'ny lisitra fifandraisana anatiny vao haingana izy. Rezwan no tonian-dahatsoratra ao aminay ao Asia Atsimo, monina ao Bangladesh. Nanambatra ny hevitr'i Afef sasany tamin'ny rohy misy ny fitsipi-pitondratena avy amina vondrona bilaogera ao Nepal izy.
Nanontany azy roa aho mba hiadi-hevitra miaraka amiko momba ny fitsipi-pitondratena ara-tserasera ary raha ilaina izy ireo na mety koa aza manerana izao tontolo izao.
Misaotra naharitra nihaino!
Izay indray ny amin'ity fitantarana ny Global Voices podcast ity, saingy mbola hiverina anefa izahay mba hihaino anareo indray amin'ny manaraka. Aza misalasala maneho hevitra na soso-kevitra.
Tamin'ny podcast, afaka mihaino mozika mahafinaritra marobe ianao. Raha te ahalala bebe kokoa ny momban'ireo mpanankato ianao, ity manaraka ity ny mombamomba izany.
Misaotra an'i Orb Gettarr noho ny Fiverenan'ny kandidà Atlantes Lemurie, misaotra an'i Mark Cotton noho ny Fanajana Ara-panahy, Superbus feat. NS tamin'i Fujjad! Maro amin'ireo mozika no hita ao amin'ny OpSound.Org,Tahiry Mozika Maimaimpoana na mivantana avy amin'ny mpanankato. Misaotra ireo feo kanto rehetra ihany koa noho ny fahombiazana sy ny raki-tsary nanampy tamin'ny fanatontosana miaraka ny podcast
Haian-tsary avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny kianja Tahrir, Kairo, Ejypta. Flickr: Jonathan Rashad (CC BY 2.0).